Kuwirirana Natezvara Naambuya | Mazano Okubatsira Mhuri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bengali Bislama Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Marathi Myanmar Nepali Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Kuwirirana Natezvara Naambuya
“Ini nemudzimai wangu pataiva nedambudziko mumba, mudzimai wangu akabva anoudza vabereki vake. Ndakazonzwa baba vake vavakundishevedza kuti vandipe mazano. Handina kufara nazvo!”—James. *
“Vamwene vangu vanogara vachiti, ‘Ndasuwa mwana wangu chaizvo!’ Vanotaura nezvekuwirirana kwavaiita, zvekuti ndinotanga kuzvipa mhosva kuti nei ndakabvuma kuroorwa nemwana wavo, dai ndakangosiya aina amai vake!”—Natasha.
Ungaitei kuti dambudziko ringavapo pakati pako nanatezvara risakanganisa imba yako? *
Kuroorana kunoita kuti pave nemhuri itsva. Bhaibheri rinoti murume akaroora “achasiya baba vake naamai vake onamatira mudzimai wake.” Ndizvo zvinoitwawo nemudzimai. Kana varoorana, Bhaibheri rinoti, vaviri vacho vachava “nyama imwe.” Vanenge vava mhuri itsva.—Mateu 19:5.
Wanano yenyu inokosha kupfuura vabereki. Chipangamazano panyaya dzemba anonzi John M. Gottman akanyora kuti, “Chimwe chinhu chinosimbisa imba kuziva kuti mava vaviri. Kuti unyatsowirirana nemudzimai wako unofanira kusiyana nezvinhu zvawaimboita kumba kwenyu.” *
Vamwe vabereki zvinovaomera kuti varege kupindira. Mumwe murume anoti: “Tisati taroorana, mudzimai wangu aigara achida kuita zvinhu zvose zvaidiwa nevabereki vake. Patakazoroorana, amai vake vakaona kuti pane aiva atora nzvimbo yavo. Izvi zvakavaomera kuti vazvibvume.”
Vanenge vachangobva kuroorana vanogona kuomerwawo. James ambotaurwa nezvake anoti, “Kuva natezvara naambuya kwakasiyana nekuva neshamwari dzaunozvisarudzira. Zvinoita sekuti mumwe munhu akuudza kuti, ‘Shamwari dzako mbiri idzi, uchida usingadi.’ Kunyange vakaita zvinhu zvausingafariri, nditezvara naambuya vako, hazvichinji!”
Kana iwe nemudzimai wako musiri kuwirirana nemhaka yatezvara kana yaambuya vako, gara pasi nemumwe wako mutaurirane zvakanaka. Shandisa zano reBhaibheri rekuti: “Tsvaka rugare, urutevere.”—Pisarema 34:14.
Mienzaniso inotevera inogona kukubatsirai kuti muone kuti mungazviita sei. Mumwe muenzaniso unoratidza maonero angaita murume uye mumwe maonero angaita mudzimai. Sezvo matambudziko acho achigona kuitika kuvarume kana vakadzi, mazano ari kukurukurwa anogona kukubatsira.
Mudzimai wako anoshuva kuti dai wati wedzerei kuwirirana naamai vake. Asi unoona sekuti ambuya vako munhu akaoma kuwirirana naye.
Edza izvi: Kurukura nyaya yacho nemudzimai wako, uye bvumawo zvimwe zvaanenge akuudza. Nyaya haisi pamaonero aunoita amai vake, asi iri pakuti unoitawo here zvinoshuviwa nomudzimai wako wawakatsidzira kuti uchamuda nomwoyo wose. Pamunokurukura, wana chinhu chimwe chete kana zviviri zvaungada kuita kuti uwedzere kuwirirana kwaunoita naamai vake, wobva wazviita. Mudzimai wako paachaona zvaunenge uchiedza kuita, achawedzera kukuremekedza.—Zvinotaurwa neBhaibheri: 1 VaKorinde 10:24.
Murume wako anotaura kuti unonyanya kuda kufadza vabereki vako kupfuura zvaunomuita.
Edza izvi: Kurukura nyaya yacho nemurume wako, uye edza kunzwisisa kuti sei achidaro. Kana uchipa vabereki vako ruremekedzo rwavanofanira kuwana sezvinongoitwa nemwana wose kumubereki, murume wako haafaniri kunetseka nazvo. (Zvirevo 23:22) Kunyange zvakadaro, unofanira kumuratidza nemashoko uye nemaitiro kuti unomuda kupfuura vabereki vako. Kana murume wako akaona kuti unomuda zvechokwadi, haazombonyanyi kunetseka nezvaunoitira vabereki vako.—Zvinotaurwa neBhaibheri: VaEfeso 5:33.
Mudzimai wako anoenda kunotsvaga mazano kuvabereki vake pane kuti auye kwauri.
Edza izvi: Taura nemudzimai wako mobvumirana kuti inyaya dzipi dzamungaudza vabereki. Edza kuva munhu anonzwisisa. Zvakaipa zvachose here kuti munhu audze mubereki zvinenge zvichimunetsa? Inyaya dzipi dzamungavaudza? Kana mukagara mabvumirana nyaya dzamunogona kuudza vabereki, mangwana hamuzonetsani.—Zvinotaurwa neBhaibheri: VaFiripi 4:5.
^ ndima 6 Kunyange zvazvo nyaya ino yakanangana nevarume, mazano arimo anoshanda kunyange kumadzimai.
^ ndima 9 Mashoko aya akatorwa mubhuku rinonzi The Seven Principles for Making Marriage Work.
“Mumwe nomumwe ngaarege kuramba achitsvaka zvake oga, asi zvomumwe munhu.”—1 VaKorinde 10:24.
“Zvakakosha kuti uwirirane natezvara navamwene vako. Ndivo vakarera murume wako, saka pasinei nezvavanokanganisa, unofanira kuvakoshesa. Unogonawo kudzidza zvakawanda kwavari. Kana ukatarisa zvakanaka zvavanoita uye wozvitevedzera uchava munhu akanaka chaizvo.”—Jessica.
Munogona kukudza vabereki venyu musingakanganisi imba yenyu.